मासु पकाउँदा मसला र तेल कति राख्ने ? यस्तो छ चिकित्सकको सुझाव
तपाईंलाई कसरी पकाएको मासु मनपर्छ ? तेलमा तारेको, तेलसँग मोलिएको, पानीमा मात्र उमालेर पकाएको, थोरै तेल मसला राखेर झोल बनाएको, आदि–आदि ।
मासु पकाउँदा तपाईंको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने र पकाउने तरिका अबलम्वन गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझावलाई ख्याल गर्नुहोस् ।
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डा. प्रेमनारायण श्रीवास्तवका अनुसार चिल्लो, पिरो र तारेको मासु खाँदा पायल्सका रोगीहरूलाई त्यसले तुरुन्त असर गर्ने तथा निरोगीहरूलाई पनि कब्जियत हुनसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
दशैं वर्षमा एकपटक आउँछ । दशैंको अवसरमा ४/५ दिन नियमित आफ्नो स्वाद अनुसारको खाना खाँदा स्वास्थ्यलाई खासै असर नपर्ने तर नियमित खाना भने स्वास्थ्यबर्धक हुनुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ ।
उमेर र पेशाअनुसार चिल्लो र मसला राख्न सकिन्छ
रातो र बोसोयुक्त मासु सकेसम्म ४० उमेर काटेपछि नखान वीर अस्पतालका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. आर.के. सिंहको सुझाव छ ।
डा. सिंहका अनुसार मासु खाँदा उमालेर र हरियो सागपात तथा फलफूलसँग मिलाएर खाँदा स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ ।
चिकित्सकका अनुसार आफ्नो पेशा वा काम अनुसार खाना कसरी खाने भन्ने पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ । धेरै समयको अन्तरालमा कहिलेकाहीँ चिल्लो र मसलादार खाना खाँदैमा स्वास्थ्यलाई असर गर्दैन ।
बालबालिकाले धेरै चिल्लो र पिरो पचाउन सक्दैनन्, त्यसैले उनीहरूका लागि सकेसम्म चिल्लो र मसला कम राखेर मासु पकाउँदा राम्रो हुन्छ ।
मधुमेह र रक्तचापका बिमारीले सकेसम्म मासु खानुहुँदैन र खानुपरेमा चिल्लो र मसाला नराखिकन पकाएर थोरै मात्रामा खानुपर्ने डा. सिंहको भनाइ छ ।
कडा शारीरिक श्रम गर्नेहरूले चिल्लो र मसलादार खाना सजिलै पचाउन सक्ने भएकाले उनीहरूका निमिक्त भने चिल्लो र मसलेदार खानालाई अस्वभाविक रूपमा लिन नपर्ने तर नियमित खानाको रूपमा भने त्यसरी प्रयोग गर्न नहुने डा. सिंहको भनाइ छ ।
सामान्यतया युवा अवस्थाका मानिसहरूले दशैंको समयमा चिल्लो र मसलेदार मासु खान सक्छन् । तर, सधैँ चिल्लो र मसलेदार खाना खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुँदैन ।